Monday, 14 Aug, 2017 2:41 PM
आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी नेपालमा पनि मनाइएको छ । भगवान विष्णुका अवतार कृष्ण लिलाको बारेमा तपाईले धेरै कुरा सुन्नुभएकै होला, अथवा टेलिभिजनहरूमा देख्नुभएकै होला । के तपाईले श्रीकृष्णको गुरूको बारेमा सुन्नुभएको छ । उनीसँग जोडीएका कथाहरु पढ्नुभएको छ ?
३. श्रीकृष्णका कुल १६,१०८ पत्निहरु छन् । जसमा ८ पटरानी छन् ।